IT Technician - MYSTERY ZILLION
Intro Myself 887
nitikiti December 2009 edited March 2011 in Job Vacancy IT Technician တစ်ယောက်ကို company တွေက ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ ခန့်ပြီး ဘာတွေလိုပ်ခိုင်းသလဲမသိဘူး ။ ဒါနဲ့ ဘယ်လို အရည် အချင်းတွေ ပြည့်စုံမှ IT Techinician လို့ ခေါ်လဲ ။ «12»မှတ်ချက်များ
yanaungmyo December 2009 edited December 2009 Registered Users nitikitiဒီပို့စ်လေး တင်တာ ကောင်းတယ်ဗျာ ကျွန်တော်လည်း ရင်ဖွင့်ချင်နေတာ ကြာနေပြီ ကျွန်တော်က နေပြည်တော် က ဟိုတယ်တစ်ခု မှာ IT Technician အဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နေပါတယ် ကျွန်တော် ကြုံရတဲ့ ဟာတွေကတော့ nitikiti မေးထားသလို ဘာတွေလုပ်ခိုင်းသလည်း ဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ် ကျွန်တော် မှာ တာ၀န်ယူထားတော့ IT Technician ပါ ဒါပေမယ့် စာစီစာရိုက်၊ဒီတီပီ၊ဒီဇိုင်း ပိုင်းတွေပါ လုပ်ပေးနေရပါတယ် ကျွန်တော် တာ၀န်ယူထားတဲ့ အပိုင်းကအလုပ်က ပါးတော့ မန်နေဂျာတွေ ခိုင်းတာကို အောင့်သတ်သတ်နဲ့ လုပ်ပေးနေရပါတယ် သူတို့ ကိုပြောပြလည်း နားမလည်ပါဘူး ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သတ်နေသမျှ ကျွန်တော့ တာ၀န်လို့ပဲ ထင်နေကြတာပါ Brain Hacker December 2009 edited December 2009 Registered Users yanaungmyo;67137 said:nitikitiဒီပို့စ်လေး တင်တာ ကောင်းတယ်ဗျာ ကျွန်တော်လည်း ရင်ဖွင့်ချင်နေတာ ကြာနေပြီ ကျွန်တော်က နေပြည်တော် က ဟိုတယ်တစ်ခု မှာ IT Technician အဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နေပါတယ် ကျွန်တော် ကြုံရတဲ့ ဟာတွေကတော့ nitikiti မေးထားသလို ဘာတွေလုပ်ခိုင်းသလည်း ဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ် ကျွန်တော် မှာ တာ၀န်ယူထားတော့ IT Technician ပါ ဒါပေမယ့် စာစီစာရိုက်၊ဒီတီပီ၊ဒီဇိုင်း ပိုင်းတွေပါ လုပ်ပေးနေရပါတယ် ကျွန်တော် တာ၀န်ယူထားတဲ့ အပိုင်းကအလုပ်က ပါးတော့ မန်နေဂျာတွေ ခိုင်းတာကို အောင့်သတ်သတ်နဲ့ လုပ်ပေးနေရပါတယ် သူတို့ ကိုပြောပြလည်း နားမလည်ပါဘူး ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သတ်နေသမျှ ကျွန်တော့ တာ၀န်လို့ပဲ ထင်နေကြတာပါ
မှန်လိုက်ခြင်း ကျွန်တော် လဲကုမ္ပဏီ တစ်ခုကပါ .. ဒါပေမဲ ့Technician အလုပ်ဆိုပြီး၀င်လုပ်လိုက်တာ...Excel နဲ ့စာရင်းတွေ ရိုက်ရတဲ ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်..ပြီးတော ့ကြော်ငြာ Design တွေ တော်တော်များများဆွဲရတယ်.. သိပ်စိတ်ညစ်ဖို ့ကောင်းတယ.်..တစ်ကယ် IT Technician တွေ ကိုခေါ်တဲ အလုပ်မရှိကြဘူးလားဟင် aungkmin December 2009 edited December 2009 Registered Users မြန်မာနိုင်ငံမှာ အားလုံးလိုလို ဒီလိုပါဘဲဗျာ.တကယ်တော့ IT Technician ဆိုတာ ကွန်ပျူတာမှာ Hardware ချို့ယွင်းတာဘဲဖြစ်ဖြစ်..Software ချို့ယွင်းတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေရှင်းပေးရတာပါ..အစ်ကိုတို့ပြောသလို မျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး...တကယ့် IT technician ခေါ်တဲ့နေရာတွေလည်း ရှိပါတယ်..စုံစမ်းကြည့်ပါဗျာ..Technician က ဒီတီပီ သမားတော့ မလုပ်နဲ့ IT သမား အောက်တယ်...IT Technician တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ A+ Hardware, Software and C++, Networking Enterprise လောက်တတ်ရင် ရပါပြီ..Hardware ဘဲရတယ်ဆိုရင်တော့ System Engineer လောက်ဘဲဖြစ်သင့်ပါတယ်..(မှားရင်တော့ ခွင့်လွတ်နော်) winlwin December 2009 edited December 2009 Registered Users ဆိုင်မလားတော့ မသိဘူး။ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကို သတိရတယ်။ တစ်ခာတည်း မင်းသားလုပ်ဖို့ မလွယ်တော့ မီးထိုး၊ ဖြတ်လျှောက် အဆင့်ကနေ စရတာပော့။ တခြားနိုင်ငံမှာတော့ ရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမှာကတော့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နောက်ကို လိုက်ရမယ်ထင်တယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း အိုင်တီပိုင်းမှာ နားလည်တာ ရှားပာလိမ့်မယ်။ :39: nitikiti December 2009 edited December 2009 Registered Users ဒီ post မှာ ဖြေသွားပေးတဲ့ အဖြေများကို အားရ ကျေနပ်မိပါတယ် ။ကျွန်တောက kmd မှာ software engineering , practical server base ဆိုတဲ့ သင်တန်းနှစ်ခု ပြီးတယ် ။ se မှာ vb, access, java လောက်သိတယ် ။ server မှာ window server 2003 , isa 2004 လောက်သာသိတယ် ။ Hardware နဲ့ network ကတော့ essential ပေါ့ ။ wireless အကြောင်း ဘယ်လောက်သိဖို့လိုလဲ ။ web မှာ ဆိုရင် html, css, js နည်းနည်းလေး နားလည်တယ် ။ web designer မလုပ်ချင်ဘူး ။ programmer လည်း မလုပ်ချင်ဘူးဗျ ။ IT Technician ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေ ဆက်လေ့လာရမလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ် ။ doeset December 2009 edited December 2009 Registered Users အခုလို အတွေ.အကြုံတွေ ကို ေ၀မျှတော. ကျနော်လည်း ပြေားရအုံးမယ်ကျနော် က Company တစ်ခုမှာ IT ပိုင်းနဲ. အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ကျနော် က အတွေ.အကြုံ ရအောင်လို.၀င်လုပ်နေတာပါTechnician တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ် ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာ လေး အကြံပေးကြပါအုံးဗျာ:5: crazyG December 2009 edited December 2009 Registered Users Yes. B'cos most of manger or owner don't know about IT and they think all of computer work are the duty of IT Man. Another reason is IT job is not much to do in myanmar's company except computer company. So IT man will do in other kwi si kwa sa about computer work. It should to do well in hardware, configuration and installation for become good IT Technician. Networking is advantage. sithu20 December 2009 edited December 2009 Registered Users မြန်မာနိုင်ငံက IT Technician ဆိုတာ ရုံးထဲမှာ mouse , keyboard ပျက်ရင် သွားလဲပေးရတယ်၊ window ကျ ရင် ပြန်တင်ပေးရတယ်၊ gtalk install , vzo install, skye install လုပ်ရတယ်။ UPS တွေသယ်ပြီးလဲပေးရတယ်၊ တစ်ခါ တစ်လေ မီးစက်တောင် ပြင်ပေးရသေးတယ်။ကိုယ် အတွက် job description သီးသန့်ရှိရင် တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဒါ ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင် မ၀င်ခင်မှာ ငြိုကြ ပါ။ nitikiti December 2009 edited December 2009 Registered Users ကျွန်တော် နွယ်ရိုးမှာ အလုပ်အပ်ထားတာ တစ်လရှိပြီ ။ အင်တာဗျူး လေးကြိမ်အတွက် ၃၂၀၀ ပေးထားတယ် ။ အင်တာဗျူးတစ်ကြိမ်မှ မခေါ်ဘူး ။ အဲဒါ တစ်လပြည့်တာနက် ပိုက်ဆံ ပြန်ထုတ်လိုက်တယ် ။ ပြန်ရတာ ကံကောင်း ။ IT Technician မလုပ်တော့ဘူးဗျာ ။ doeset December 2009 edited December 2009 Registered Users :100:ဟုတ်တယ် အကို ရေ ကျနော် တောင် Computer နဲ. တော်တော် ထိတွေ.နေရတယ်:65:။ မနေ.ကဆို ကိုင်ရတာများ Monitor ၃ လုံးတောင် ထမ်းပြီးဆိပ်ကမ်းသာလမ်းကို ပို.ရတာကို ပြေားတာ :)) Morris December 2009 edited December 2009 Moderators nitikiti;67224 said:ဒီ post မှာ ဖြေသွားပေးတဲ့ အဖြေများကို အားရ ကျေနပ်မိပါတယ် ။ကျွန်တောက kmd မှာ software engineering , practical server base ဆိုတဲ့ သင်တန်းနှစ်ခု ပြီးတယ် ။ se မှာ vb, access, java လောက်သိတယ် ။ server မှာ window server 2003 , isa 2004 လောက်သာသိတယ် ။ Hardware နဲ့ network ကတော့ essential ပေါ့ ။ wireless အကြောင်း ဘယ်လောက်သိဖို့လိုလဲ ။ web မှာ ဆိုရင် html, css, js နည်းနည်းလေး နားလည်တယ် ။ web designer မလုပ်ချင်ဘူး ။ programmer လည်း မလုပ်ချင်ဘူးဗျ ။ IT Technician ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေ ဆက်လေ့လာရမလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ် ။
ဒါနဲ ့အကိုက ဘာလုပ်ချင်တာလဲမသိ ဘယ်အပိုင်းတွေကိုပိုင်နိုင်လဲ မသိ အကိုတက်တဲ့သင်တန်းတွေ ကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်သလောက်တော့ ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော် အကိုက web designer လည်းမလုပ်ချင်ဘူး programmer လည်းမလုပ်ချင်တာကို ဘာလို့SE သွားတက်တာလဲမသ်ိ ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ ရှစ်သောင်းလားမသိဘူး များတယ်ထင်လို ့(အချိန်မရတာ ကျောင်းပြန်ဖွင့်တာလဲ ပါပါတယ်) ကျွန်တော်လည်း BSE ပဲတက်ခဲ့တာ ကျွန်တော်အမြင်ကတော့programming စိတ်မ၀င်စားပဲ SE မတက်သင့်ဘူးလို ့ထင်တာပဲ ကျန်တဲ့သူတွေအမြင်လေးတွေပြောပါဦး bhikkhusirin December 2009 edited December 2009 Registered Users [quote=yanaungmyo;67137]nitikitiဒီပို့စ်လေး တင်တာ ကောင်းတယ်ဗျာ ကျွန်တော်လည်း ရင်ဖွင့်ချင်နေတာ ကြာနေပြီ ကျွန်တော်က နေပြည်တော် က ဟိုတယ်တစ်ခု မှာ it technician အဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နေပါတယ် ကျွန်တော် ကြုံရတဲ့ ဟာတွေကတော့ nitikiti မေးထားသလို ဘာတွေလုပ်ခိုင်းသလည်း ဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ် ကျွန်တော် မှာ တာ၀န်ယူထားတော့ it technician ပါ ဒါပေမယ့် စာစီစာရိုက်၊ဒီတီပီ၊ဒီဇိုင်း ပိုင်းတွေပါ လုပ်ပေးနေရပါတယ် ကျွန်တော် တာ၀န်ယူထားတဲ့ အပိုင်းကအလုပ်က ပါးတော့ မန်နေဂျာတွေ ခိုင်းတာကို အောင့်သတ်သတ်နဲ့ လုပ်ပေးနေရပါတယ် သူတို့ ကိုပြောပြလည်း နားမလည်ပါဘူး ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သတ်နေသမျှ ကျွန်တော့ တာ၀န်လို့ပဲ ထင်နေကြတာပါကျွနု််ပ်သိသလောက်တော့ ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာမှာသာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလဲ ဒီလိုချည်းပါပဲ။ ဆရာမလုပ်ပြီး စာသင်ပေးရသူက ကလေးထိန်းပေးရတာမျိုး။ စာရင်းသမားက ကားမောင်းပေးရတာမျိုး။ အို စုံလို့ပါပဲ။ သူ့လုပ်ငန်းနဲ့ သူ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကို ခိုင်းတဲ့သူကလဲ မခိုင်းတတ်ပါဘူး။ လုပ်တဲ့သူကလဲ မလုပ်လို့မဖြစ်တော့ လုပ်ရတာပေါ့။ ဒါက အမှန်တကယ်တော့ လူမျိုးရဲ့ ကူညီတတ်၊ အားနာတတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ ဆိုင်နေတယ်။ ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးပြောဖို့ရာကတော့ ခက်သေးတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအမြင်တူမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နေရာမှန်ရဖို့တော့ လိုသေးတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ အောက်က ဘောင်းဘီကို့ရို့ကားရား၀တ်ပြီး ဦးခေါင်းက ဘီးဆံပတ် ပတ်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကို ရှာဖွေ ရရှိနိုင်ကြပါစေဗျာ။ *zin* December 2009 edited December 2009 Registered Users ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ပြောကို မပြောချင်ဘူး။ ပြောပြန်ရင်လည်း အောင်မင်းလွန်ရာ ကြမယ်။ ဒို့ရွှေနိုင်ငံက ရွှေမြန်မာတွေများ Computer ကို တော်တော်ကြောက်ကြတယ်။ common sense လည်း သုံးဘူး။ တခုခုဖြစ်ပီဆို နည်းနည်းပါးပါး စူးစမ်းမယ် မရှိဘူး။ IT Technician လား Programmer လား Project Manager လား ဟင့်အင်း သိဘူး၊ ကွန်ပျူတာသမားဆို ထစ်ခနဲရှိ ပြေးခေါ်မှာဘဲ ဆိုတာကြီးပဲ၊ ကြိုးလေးလွတ်တာကအစ သူများတကာကို လာခေါ်ပြီး လုပ်ခိုင်းတယ်၊ Scan ကအစ ဖတ်လိုက်ရတာ လက်ကို ပြုတ်ထွက်မလား မှတ်တယ် ဟွန့် မုန်းတယ် :2: myanmarmen December 2009 edited December 2009 Registered Users [quote=*zin*;67484]ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ပြောကို မပြောချင်ဘူး။ ပြောပြန်ရင်လည်း အောင်မင်းလွန်ရာ ကြမယ်။ ဒို့ရွှေနိုင်ငံက ရွှေမြန်မာတွေများ computer ကို တော်တော်ကြောက်ကြတယ်။ common sense လည်း သုံးဘူး။ တခုခုဖြစ်ပီဆို နည်းနည်းပါးပါး စူးစမ်းမယ် မရှိဘူး။ it technician လား programmer လား project engineer လား ဟင့်အင်း သိဘူး၊ ကွန်ပျူတာသမားဆို ထစ်ခနဲရှိ ပြေးခေါ်မှာဘဲ ဆိုတာကြီးပဲ၊ ကြိုးလေးလွတ်တာကအစ သူများတကာကို လာခေါ်ပြီး လုပ်ခိုင်းတယ်၊ scan ကအစ ဖတ်လိုက်ရတာ လက်ကို ပြုတ်ထွက်မလား မှတ်တယ် ဟွန့် မုန်းတယ် :2:ဟုတ်တယ်ဗျာ.. ကျနော်တို့ တွေ အိုင်တီ ပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ မဟုတ်တာတွေပဲ လုပ်နေရတယ် ... .. မြန်မြန် တိုးတက်ပါစေဗျာ... (လစာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ နော်) လစာများများပေးရင်တော့ .. ဟင့် မုန်းဦးမှာလား ဟင်... :p yanaungmyo December 2009 edited December 2009 Registered Users aungkmin ပြောသလိုဆို ကျွန်တော်လည်း IT Technician တစ်ယောက်မဖြစ်သေးဘူးထင်တာပဲ ကျွန်တော်က Hardware ကောင်းကောင်းရတယ် Networking ကောင်းကောင်းရတယ် Software and C++ တော့ ကောင်းကောင်းမရသေးဘူး ခုမှ တည်းမိခေါက်မိ ရုံပဲရှိသေးတယ် ဟိုဆက်ဆက် ဒီဆက်ဆက် တော့ ရတယ် ဒီဇိုင်းပိုင်းတို့ ဗီဒီယိုအက်ဒစ်တို့ HTML တို့ ပြီးတော့ နောက် တစ်ခု ကျွန်တော် ဆွေးနွေးချင်သေးတယ် IT Technician တစ်ယောက်ရဲ့ လစာ ပါ ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားတာရှိလည်း ဘယ်လောက်ရမှ ကျွန်တော်တို့ IT သမားတွေ အလုပ်ကိုလက်ခံသင့်လည်း ဆွေးနွေး ပေးကြပါဦး Y3llowCak3 December 2009 edited December 2009 Registered Users aungkmin;67184 said:မြန်မာနိုင်ငံမှာ အားလုံးလိုလို ဒီလိုပါဘဲဗျာ.တကယ်တော့ IT Technician ဆိုတာ ကွန်ပျူတာမှာ Hardware ချို့ယွင်းတာဘဲဖြစ်ဖြစ်..Software ချို့ယွင်းတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေရှင်းပေးရတာပါ..အစ်ကိုတို့ပြောသလို မျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး...တကယ့် IT technician ခေါ်တဲ့နေရာတွေလည်း ရှိပါတယ်..စုံစမ်းကြည့်ပါဗျာ..Technician က ဒီတီပီ သမားတော့ မလုပ်နဲ့ IT သမား အောက်တယ်...IT Technician တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ A+ Hardware, Software and C++, Networking Enterprise လောက်တတ်ရင် ရပါပြီ..Hardware ဘဲရတယ်ဆိုရင်တော့ System Engineer လောက်ဘဲဖြစ်သင့်ပါတယ်..(မှားရင်တော့ ခွင့်လွတ်နော်)
ကဲ--- ကုတ်လုပ်လိုက်ပီ ဒီတီပီဆိုတာ အိုင်တီသမားတွေအတွက် Dirty Job လိုမျိုးများဖြစ်နေလို့လား သူများ source တွေ ခိုးချနေရလို့လား မဖြစ်စလောက်လုပ်ပြီး မတရားပိုက်ဆံတောင်းနေရလို့လားအိုင်တီ တက်ကနစ်ရှာန် ဆိုတာကောဗျာ ဒီတီပီသမားထက်ဘာတွေများ မြင့်မြတ်နေလို့လဲ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာနဲ့လုပ်စားတဲ့သူချင်းပဲဗျာ ဟိုဟာအောက်တယ် ဒီဟာနိမ့်တယ် မပြောပါနဲ့ဗျာခင်ဗျား အိုင်တီနဲ့ အလုပ်မဖြစ်လို့ ဒီတီပီဘက် လိုင်းကူးကြည့်လိုက် ချက်ချင်းအလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်သလား လွယ်မယ်ထင်သလား ဂျာနယ်တစ်စောင် Layout ချကြည့်စမ်းပါဗျာ ခင်ဗျားမျက်မှန်းရမ်းဆပြီး ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ အိုင်တီသမားဆိုတာထက် ဂျာနယ် Layout ဆွဲတဲ့သူက တာ၀န်ပိုကြီးတယ်နော် ဒင်းပေါက်ကရလုပ်လိုက်ရင် ဂျာနယ်တစ်စောင်လုံးပြောင်းပြန်စောက်ထိုးတွေဖြစ် အကုန်ကျော်ခွကုန်ရင် ထုတ်ေ၀သူ သိန်းရာဂဏန်း ရင်းထားရတာ ပလုံသွားမှာ စက်ပေါ်တင်ပြီးသွားရင် ဘာတစ်ခုမှ ပြန်ပြင်လို့မရဘူးအဲဒါ ဒီတီပီဆိုတဲ့လိုင်းထဲက အကန့်အသေးလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ် အောက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ်ဘာသာ ပုံမလာလို့ ပရိုဖြစ်မလာပဲ အောက်ခြေသိမ်းတွေလုပ်နေရမှ အောက်တာဗျာ၊ခင်ဗျားဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် ပရိုမဖြစ်လို့ကတော့ အောက်နေမှာပဲ အမြဲအောက်နေမှာပဲ EiEiYgn December 2009 edited December 2009 Registered Users အောက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ်ဘာသာ ပုံမလာလို့ ပရိုဖြစ်မလာပဲ အောက်ခြေသိမ်းတွေလုပ်နေရမှ အောက်တာဗျာ၊ခင်ဗျားဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် ပရိုမဖြစ်လို့ကတော့ အောက်နေမှာပဲ အမြဲအောက်နေမှာပဲ __________________ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ...ဒါကိုတော့ထောက်ခံပါတယ် ဆီပဲရောင်းေ၇ာင်း ဆန်ပဲေ၇ာင်းေ၇ာင်း ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်တာကပိုကောင်းပါတယ် ဆန်ပဲရောင်း ငပိမရောင်းနဲ့ ငပိကနံတယ်ဆိုတာမျိုး ကတော့ မကောင်းပါဘူး။ Morris December 2009 edited December 2009 Moderators Y3llowCak3;67577 said:ကဲ--- ကုတ်လုပ်လိုက်ပီ ဒီတီပီဆိုတာ အိုင်တီသမားတွေအတွက် Dirty Job လိုမျိုးများဖြစ်နေလို့လား သူများ source တွေ ခိုးချနေရလို့လား မဖြစ်စလောက်လုပ်ပြီး မတရားပိုက်ဆံတောင်းနေရလို့လားအိုင်တီ တက်ကနစ်ရှာန် ဆိုတာကောဗျာ ဒီတီပီသမားထက်ဘာတွေများ မြင့်မြတ်နေလို့လဲ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာနဲ့လုပ်စားတဲ့သူချင်းပဲဗျာ ဟိုဟာအောက်တယ် ဒီဟာနိမ့်တယ် မပြောပါနဲ့ဗျာခင်ဗျား အိုင်တီနဲ့ အလုပ်မဖြစ်လို့ ဒီတီပီဘက် လိုင်းကူးကြည့်လိုက် ချက်ချင်းအလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်သလား လွယ်မယ်ထင်သလား ဂျာနယ်တစ်စောင် Layout ချကြည့်စမ်းပါဗျာ ခင်ဗျားမျက်မှန်းရမ်းဆပြီး ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ အိုင်တီသမားဆိုတာထက် ဂျာနယ် Layout ဆွဲတဲ့သူက တာ၀န်ပိုကြီးတယ်နော် ဒင်းပေါက်ကရလုပ်လိုက်ရင် ဂျာနယ်တစ်စောင်လုံးပြောင်းပြန်စောက်ထိုးတွေဖြစ် အကုန်ကျော်ခွကုန်ရင် ထုတ်ေ၀သူ သိန်းရာဂဏန်း ရင်းထားရတာ ပလုံသွားမှာ စက်ပေါ်တင်ပြီးသွားရင် ဘာတစ်ခုမှ ပြန်ပြင်လို့မရဘူးအဲဒါ ဒီတီပီဆိုတဲ့လိုင်းထဲက အကန့်အသေးလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ် အောက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ်ဘာသာ ပုံမလာလို့ ပရိုဖြစ်မလာပဲ အောက်ခြေသိမ်းတွေလုပ်နေရမှ အောက်တာဗျာ၊ခင်ဗျားဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် ပရိုမဖြစ်လို့ကတော့ အောက်နေမှာပဲ အမြဲအောက်နေမှာပဲ
ဟုတ်ပါတယ် အကိုတို ့ရေ ဒေါသမထွက်ကြပါနဲ့အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ ပဲမဟုတ်လား It လောက သားအချင်းချင်း အချင်းမပွားကြပါနဲ ့ဗျာ ယုတ်ရွအဆုံး ကွမ်းယာတာတောင် သူ ့ပညာနဲ ့သူရှိကြတာမဟုတ်လား ဗျာ ၀င်ပြောမိတာ အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ကြပါဗျာ Y3llowCak3 December 2009 edited December 2009 Registered Users Tsuna lade;67660 said:ဟုတ်ပါတယ် အကိုတို ့ရေ ဒေါသမထွက်ကြပါနဲ့အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ ပဲမဟုတ်လား It လောက သားအချင်းချင်း အချင်းမပွားကြပါနဲ ့ဗျာ ယုတ်ရွအဆုံး ကွမ်းယာတာတောင် သူ ့ပညာနဲ ့သူရှိကြတာမဟုတ်လား ဗျာ ၀င်ပြောမိတာ အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ကြပါဗျာ
IT Technician အပီအပြင်မလုပ်ရလို့ မဆိုင်တာတွေမလုပ်ချင်လို့ အိုင်တီ သီးသန့်လေးပဲ လုပ်ချင်လို့ ဆိုရင် လွယ်ပါတယ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်လိုက်ပါကွမ်းယာသည်လောက်တောင်အရင်းအနှီးမများပါဘူးwebsite တစ်ခုလောက်တင်ဗျာ = အနိမ့်ဆုံး dynamic site အတွက် ဒေါ်လာ 70 (blog တွေ free host တွေမှာဆိုရင် အလကားရပေမယ့် ဒီတခါတော့ ၀ယ်လိုက်ဗျာ_လုပ်ငန်းအတွက် ဆက်သွယ်ဖို့ email လိပ်စာ = Gmail ဗျာ အလကားရမယ်ကိုယ်ရဲ့ IT Products , Services, Training, etc အစရှိသည်ဖြင့် အချက်အလက်တွေတင်ဗျာအလုပ်ရလာရင် အင်တာနက်ကဖေးတွေမှာ တစ်နာရီ ၂၀၀-၄၀၀ နဲ့ သုံး Products တွေဖန်တီးဗျာမလုပ်တတ်တာတွေပါလာရင် Google မှာရှာဗျာတကယ် Professional ဆန်ဆန် အလုပ်လုပ်ရင် အလုပ်ဖြစ်မှာပါ ကိုယ့်အလုပ်လူသိများဖို့အတွက် freeware, shareware, trialware တွေများများရေး ကိုယ့်ရဲ့ဆိုက်မှာတင်ထားဗျာဒီအထိ အရင်းအနှီးက ဒေါ်လာ 70 ပဲရှိသေးတယ်နော် ဟုတ်ပီ လိပ်စာကတ်လေး Pamphlet လေး လည်း လိုချင်လိုမှာ အဲဒီအတွက် ဒေါ်လာ 30 ထားဗျာ ၊ တကယ်ဆိုအဲဒိလောက်တောင်မကုန်ဘူး အဲ၊ ကွမ်းယာသည်လောက်အရင်းအနှီးမရှိသေးဘူးနော် ခင်ဗျားကို စည်ပင်ရဲက လာမဖမ်းဘူး ပြည်တွင်းအခွန်က စာမထုတ်ဘူး စည်ပင်က လိုင်စင်မစစ်ဘူး အိုင်တီလုပ်ငန်းရှင်လုပ်ရတာ အရမ်းလွတ်လပ်တယ်နော် ဘယ်ကုမ်ပဏီမှာမှ အောက်ခြေသိမ်း လိုက်လုပ်နေစရာမလိုဘူး ဟုတ်တယ်ဗျာ ကိုယ့်အဆင့်နဲ့ကိုယ်ဗျာ ကိုယ့်အတွက်အောက်တယ်ထင်တဲ့ ဒီတီပီ တွေလည်း လုပ်စရာမလိုဘူး Gtalk လေးနဲ့ကျူလိုက် အလုပ်လေးမျှော်လိုက် ဟန်ကျလိုက်လေဒီအထိခင်ဗျားမှာ လိုအပ်ချက် ၂ ခုပဲရှိတယ် ငွေတစ်သိန်းလောက်အရင်းအနှီးနဲ့ အလုပ်လာအပ်ရင် တကယ်လုပ်တတ်ဖို့ပဲFacebook, youtube ဆိုတဲ့ဆိုက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မျက်စိရှေ့မှာတင် ကြီးထာွားအောင်မြင်လာတာပါဗျာ အဲဒီအတွက် သူတို့တွေ ဒေါ်လာ သိန်းသန်းချီအရင်းအနှီးတွေမကုန်ပါဘူးဗျာ လူအင်အားဆိုရင်လည်း အဲဒိ ၂ ဆိုက်ပေါင်းမှ ၆ ယောက်ပြည့်ရဲ့လားမသိဘူး ပြီးတော့ အဲဒီဆိုက်တွေဟာ ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်ကမှလာအပ်လို့ထူထောင်တာမဟုတ်ဘူး သူတို့ရဲ့အိုင်ဒီယာကို အကောင်ထည်ဖော်ထားတာ အိုင်ဒီယာကောင်းလို့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံသေသပ်ကျွမ်းကျင်လို့ အောင်မြင်တာပါ ဒိလောက် လွတ်လတ်ပြီး အကုန်ကျနည်း အမြတ်စွန်း ဒေါ်လာဘီလျံများစွာဗျာ အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေတာ လုပ်လေဗျာ အင်း ဒါမှ မလုပ်နိုင်ရင်လည်း လုပ်နိုင်လို့လုပ်နေတဲ့သူတွေဆီမှာ ၀င်လုပ်ပေါ့ ဒါကတော့မလွတ်လတ်တော့ဘူး ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျမလုပ်နိုင်တော့ဘူး သူက အလုပ်ရှင်ဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့တန်မယ်ထင်တာ ခိုင်းလိမ့်မယ် ဘယ်နားမှ အသုံးမကျဘူးထင်ရင် စားပွဲဖုန်သုတ် ကော်ဖီဖျော် ကွမ်းယာ၀ယ် အဲဒါတွေစခိုင်းလာလိမ့်မယ် အဲဒါတွေမှမခိုင်းဘူးဆိုရင် အလုပ်ကနေ ထုတ်ပစ်ရတော့မှာကိုးကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ထွန်းအောင်မလုပ်နိုင် အောင်မြင်ပြီးသားသူဆီမှာလည်း အဆင့်မီအောင် အလုပ်မလုပ်နိုင် အဲဒီလိုဖြစ်နေဘီဆိုရင်တော့ ဒီပညာရပ် ဒီနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အများကြီး ဆည်းပူးလေ့လာဖို့ လိုသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ အင်း အချိန်လည်း မရဘူး ဆက်လည်း မလေ့လာချင်ဘူးဆိုရင်တော့ TsunaLade ပြောတဲ့ ကွမ်းယာသာရောင်းဗျာ သူပြောသလိုတော့ ကျွမ်းကျင်မှုအများကြီးမလိုဘူးဗျ ၄ရက် ၅ရက်လောက်နေရင် လက်ကျင့်ရသွားလိမ့်မယ်၀င်ငွေလည်းမှန်ပါလိမ့်မယ် စား၀တ်နေရေး လည်း ဖူလုံပါလိမ့်မယ် ကွမ်းယာဆိုင်နာမည်ကိုတော့ "IT ကွမ်းယာ" လို့လည်း မပေးလိုက်နဲ့အုုံးနော်၊ yanaungmyo December 2009 edited December 2009 Registered Users Y3llowCak3က ဘာ အလုပ်များလုပ်စားပါသလည်း မသိဘူး ကျွန်တော်တို့ ပြောနေတဲ့ စကားထဲမှာ ဒီတီပီ သမားတွေကို စော်ကားထားတာ တစ်ခွန်းမှ မပါသေးဘူးထင်တယ် အားလုံးက သူ့ အစွမ်းစ နဲ့ သူရှိကြပြီးသားပါ ကိုယ်က မလုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်တဲ့သူက ဆရာပဲ အဆွယ်ရှိတဲ့သူက အဆွယ်ကိုအားကိုးတယ် ဂျိုရှိတဲ့သူက ဂျိုကို အားကိုးတယ်ကျွန်တော်တို့က ကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့ ခြင်္သေ့ တွေပါ ရေထဲမှာတော့ လာ မကြင်လည်ခိုင်းပါနဲ့ မိချောင်းတွေ မဟုတ်လို့ ပါ ကွမ်းယာတော့ မရောင်းပရစေနဲ့ ကျွန်တော် မကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်မို့ပါ ဗျာ Y3llowCak3 December 2009 edited December 2009 Registered Users yanaungmyo;67704 said:Y3llowCak3က ဘာ အလုပ်များလုပ်စားပါသလည်း မသိဘူး ကျွန်တော်တို့ ပြောနေတဲ့ စကားထဲမှာ ဒီတီပီ သမားတွေကို စော်ကားထားတာ တစ်ခွန်းမှ မပါသေးဘူးထင်တယ် အားလုံးက သူ့ အစွမ်းစ နဲ့ သူရှိကြပြီးသားပါ ကိုယ်က မလုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်တဲ့သူက ဆရာပဲ အဆွယ်ရှိတဲ့သူက အဆွယ်ကိုအားကိုးတယ် ဂျိုရှိတဲ့သူက ဂျိုကို အားကိုးတယ်ကျွန်တော်တို့က ကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့ ခြင်္သေ့ တွေပါ ရေထဲမှာတော့ လာ မကြင်လည်ခိုင်းပါနဲ့ မိချောင်းတွေ မဟုတ်လို့ ပါ ကွမ်းယာတော့ မရောင်းပရစေနဲ့ ကျွန်တော် မကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်မို့ပါ ဗျာ
ကျွန်တော် web application တွေရေးတတ်တယ် Software ရေးတတ်တယ်ရေးပြီးသား ရောင်းစားထားပြီးသားတွေလည်းရှိတယ် ဟိုးအရင် ပင်တီယန် ခေတ်ကတည်းက ကွန်ပျူတာတွေပြင်လာတာ အဲဒီခေတ်က စက်တစ်စုံကို ကားတစ်စင်းစာလောက်တန်တာနောပီအိုင်စီရေးတတ်တယ်ဗျာ အနည်းအကျဉ်းပေါ့ ဒါပေမယ့် လုပ်စားမယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ်အပြင်အလုပ်နေနဲ့ ကားမောင်းတတ်တယ် ၁၂ဘီးကားနော် သေးသေးမွားမွားကားတွေမဟုတ်ဘူး စက်ကြီးမောင်းနိုင်တယ် ထော်လာဂျီမောင်းနိုင်တယ် လက်ခဏာဖတ်တတ်တယ် နောက်ထပ်ပြောရရင် အများကြီးဗျာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုယ်နဲ့ အံ၀င်မယ့်အလုပ်တစ်ခုရှာရတာ မခဲယဉ်းဘူးဗျဒါပေမယ့် လုပ်စားနေတာ ဒီတီပီပါပဲ ကိုယ်ပိုင်ဗျာ။ ဒီတီပီလုပ်ငန်းက နေရမရွေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျ၀န်ထမ်း အခက်အခဲနည်းတယ် ၀င်ငွေထွက်ငွေ တည်ငြိမ်တယ် Risk အရမ်းမများဘူး ဒါကြောင့် DTP လုပ်ငန်းကို ရွေးထားတာ ပြီးတော့ ပုံနှိပ်နည်းပညာတွေက ကျနော် Crazy အရမ်းဖြစ်တာပေါ့၀ါသနာပါတာကတော့ စားပြီးအိပ် အိပ်ပြီးစားအလုပ်ကိုင်မကောင်းလို့က အခက်အခဲအရမ်းဖြစ်လာလို့ စုဆောင်းထားတာလေးတွေ ကုန်ရင် ကျျွန်တော် ကွမ်းယာတတ်တယ် လဘက်ရည်ဖျော်တတ်တယ် ကျနော် သူများ ကွမ်းယာဆိုင် ၃ ဆိုင်လောက် ငွေထုတ်တည်ထောင်ပေးထားတာရှိတယ် ဒါတွေက ကျနော်လုပ်စားနေတာနဲ့ လုပ်တတ်တဲ့ အပိုင်းလေးတွေခင်ဗျားကိုအကြံပေးရရင် ခင်ဗျားလုပ်နေတဲ့ ဟိုတယ်ဆိုတာ အိုင်တီလုပ်ငန်းမှမဟုတ်တာဗျာ ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီတီပီတွေပဲလုပ်နေရတာ အဲဒါနေပြည်တော်မလို့ပေါ့ဗျာ ဆိုင်ရှားလို့ ရန်ကုန်လိုသာဆို ခင်ဗျား ပုံလေးတောင်ဆွဲရမှာမဟုတ်ဘူး အစည်းေ၀းဖိတ်စာလောက်ရို်က် အခမ်းနားကျင်းပခွင့်လျှောက်လွာလောက်ရိုက်နေရမှာ ဒီအလုပ်ကို ခင်ဗျားဘာသာရွေးချယ်ခဲ့တာ ဘာမှဖီလင်ဖြစ်မနေနဲ့ ခင်ဗျား တကယ် အိုင်တီပညာနဲ့ပဲအသက်မွေးကြောင်းပြုချင်ရင် ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ မြန်မြန်ထွက် ပြီးရင် Software house တစ်ခုမှာ သွားလုပ်ဗျာ ရန်ကုန်မှာ ပေါမှပေါဗျာ ကျွမ်းကျင်၀န်ထမ်းလိုချင်လွန်းလို့ တပိုင်းသေနေတာ လစာများများလိုချင်ရင် စင်ကာပူထွက်ဗျာခင်ဗျားနေရာမှားနေလို့ပါ ဟိုတယ်အလုပ်က အိုင်တီသမားကို ဘယ်လိုမှ အထောက်အကူမပြုနိုင်ဘူးဗျ emo December 2009 edited December 2009 Registered Users Y3llowCak3;67690 said:IT Technician အပီအပြင်မလုပ်ရလို့ မဆိုင်တာတွေမလုပ်ချင်လို့ အိုင်တီ သီးသန့်လေးပဲ လုပ်ချင်လို့ ဆိုရင် လွယ်ပါတယ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်လိုက်ပါကွမ်းယာသည်လောက်တောင်အရင်းအနှီးမများပါဘူးwebsite တစ်ခုလောက်တင်ဗျာ = အနိမ့်ဆုံး dynamic site အတွက် ဒေါ်လာ 70 (blog တွေ free host တွေမှာဆိုရင် အလကားရပေမယ့် ဒီတခါတော့ ၀ယ်လိုက်ဗျာ_လုပ်ငန်းအတွက် ဆက်သွယ်ဖို့ email လိပ်စာ = Gmail ဗျာ အလကားရမယ်ကိုယ်ရဲ့ IT Products , Services, Training, etc အစရှိသည်ဖြင့် အချက်အလက်တွေတင်ဗျာအလုပ်ရလာရင် အင်တာနက်ကဖေးတွေမှာ တစ်နာရီ ၂၀၀-၄၀၀ နဲ့ သုံး Products တွေဖန်တီးဗျာမလုပ်တတ်တာတွေပါလာရင် Google မှာရှာဗျာတကယ် Professional ဆန်ဆန် အလုပ်လုပ်ရင် အလုပ်ဖြစ်မှာပါ ကိုယ့်အလုပ်လူသိများဖို့အတွက် freeware, shareware, trialware တွေများများရေး ကိုယ့်ရဲ့ဆိုက်မှာတင်ထားဗျာဒီအထိ အရင်းအနှီးက ဒေါ်လာ 70 ပဲရှိသေးတယ်နော် ဟုတ်ပီ လိပ်စာကတ်လေး Pamphlet လေး လည်း လိုချင်လိုမှာ အဲဒီအတွက် ဒေါ်လာ 30 ထားဗျာ ၊ တကယ်ဆိုအဲဒိလောက်တောင်မကုန်ဘူး အဲ၊ ကွမ်းယာသည်လောက်အရင်းအနှီးမရှိသေးဘူးနော် ခင်ဗျားကို စည်ပင်ရဲက လာမဖမ်းဘူး ပြည်တွင်းအခွန်က စာမထုတ်ဘူး စည်ပင်က လိုင်စင်မစစ်ဘူး အိုင်တီလုပ်ငန်းရှင်လုပ်ရတာ အရမ်းလွတ်လပ်တယ်နော် ဘယ်ကုမ်ပဏီမှာမှ အောက်ခြေသိမ်း လိုက်လုပ်နေစရာမလိုဘူး ဟုတ်တယ်ဗျာ ကိုယ့်အဆင့်နဲ့ကိုယ်ဗျာ ကိုယ့်အတွက်အောက်တယ်ထင်တဲ့ ဒီတီပီ တွေလည်း လုပ်စရာမလိုဘူး Gtalk လေးနဲ့ကျူလိုက် အလုပ်လေးမျှော်လိုက် ဟန်ကျလိုက်လေဒီအထိခင်ဗျားမှာ လိုအပ်ချက် ၂ ခုပဲရှိတယ် ငွေတစ်သိန်းလောက်အရင်းအနှီးနဲ့ အလုပ်လာအပ်ရင် တကယ်လုပ်တတ်ဖို့ပဲ၊
ကျွန်တော် အိုင်တီသမားစလုပ်တော့ network administrator ဗျ ဟိဟိ network ခေါင်းတောင်မညှက်တတ်ဘူး ..တကယ်ပြောတာ ဒါနဲ့ သူတို့ ကလဲ ခန့်မိတဲ့ အတူတူ မထူးဘူးဆိုပြီး သူတို့ web site ကြီး ပြင်ခိုင်းရော.. သိများသိမလားဆိုပြီး ပေါ့ဗျာ.. အထင်တကြီးနဲ့ . ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်း မသိပါဘူး မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီတုန်းက သူတို့ သုံးတဲ့ cms က cmsimple ဗျာ .html တောင်မသိတဲ့သူ က cms ကို Update လုပ်ရတယ် cms ဆိုတာကလဲ အဲဒီမှာ ကျတော့ မလွယ်ပြန်ဘူး .. ဒီဇိုင်းချိန်းချင်တော့ css တွေ ပြောင်းရတာပါလာရော .. အဲဒါနဲ့ ကိုယ်လဲ အဲဒီမှာ ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်ပေါ့ ကွန်နက်ရှင်ကျတဲ့ အခါ . ပုဂံကို ဖုန်းဆက် . စက်ပျက်ရင် ဟိုဖြုတ် ဒီဖြုတ်ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် အလှည့်အပြောင်းပေါ့ဗျာ.. network သမားကနေ web သမားဘ၀ရောက်ပြီး အခု ဆို ကိုယ့်ဘာသာကိုတောင် web group သေးသေးလေး လုပ်ပြီး ခပ်တည်တည် လုပ်စားနေတာ.. တကယ်လဲ ကိုယ့်ဘက် က ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအိုကေတယ် ဆို ရင် ငွေရင်း နှီး က နည်းနည်း လေးနဲ့ လုပ်စားလို့ရပါတယ် ကွမ်းယာသည်လောက်တောင် အရင်းအနှီးမများဘူး ဆိုတာ တကယ် ဟုတ်တယ် .. ဒါပေမယ့် စိတ်တော့ တော်တော်ညစ်ရတယ် ည သန်းခေါင်းကြီး စိတ်ကူးပေါက်လို့ ဆိုပြီး စာသားတွေ ထပ်ထည့်တဲ့ MD နဲ့ လဲ ဖုန်းပြော လို့ပြောရ ၊ ဒိုမိ်န်း၀ယ်ပြီးမှ နာမည်ကြီးကတုံးတယ်ဆိုပြီး ပြောင်းချင် တဲ့ သူနဲ့ လဲတွေ့ရ ..web သမားဘ၀ ကလဲ တကယ့် ၀က်ပါပဲ .. ကြုံတုံး ကြော်ငြာ ၀င်ရအုံးမယ် ကျွန်တော့် ဆီ ဆိုက်တစ်ခုရေးရင် ဒိုမိန်းပါပါ ပြီးမှ သုံးသောင်းခွဲထဲပါ.:D Y3llowCak3 December 2009 edited December 2009 Registered Users emo;67759 said:ကျွန်တော် အိုင်တီသမားစလုပ်တော့ network administrator ဗျ ဟိဟိ network ခေါင်းတောင်မညှက်တတ်ဘူး ..တကယ်ပြောတာ ဒါနဲ့ သူတို့ ကလဲ ခန့်မိတဲ့ အတူတူ မထူးဘူးဆိုပြီး သူတို့ web site ကြီး ပြင်ခိုင်းရော.. သိများသိမလားဆိုပြီး ပေါ့ဗျာ.. အထင်တကြီးနဲ့ . ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်း မသိပါဘူး မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီတုန်းက သူတို့ သုံးတဲ့ cms က cmsimple ဗျာ .html တောင်မသိတဲ့သူ က cms ကို Update လုပ်ရတယ် cms ဆိုတာကလဲ အဲဒီမှာ ကျတော့ မလွယ်ပြန်ဘူး .. ဒီဇိုင်းချိန်းချင်တော့ css တွေ ပြောင်းရတာပါလာရော .. အဲဒါနဲ့ ကိုယ်လဲ အဲဒီမှာ ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်ပေါ့ ကွန်နက်ရှင်ကျတဲ့ အခါ . ပုဂံကို ဖုန်းဆက် . စက်ပျက်ရင် ဟိုဖြုတ် ဒီဖြုတ်ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် အလှည့်အပြောင်းပေါ့ဗျာ.. network သမားကနေ web သမားဘ၀ရောက်ပြီး အခု ဆို ကိုယ့်ဘာသာကိုတောင် web group သေးသေးလေး လုပ်ပြီး ခပ်တည်တည် လုပ်စားနေတာ.. တကယ်လဲ ကိုယ့်ဘက် က ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအိုကေတယ် ဆို ရင် ငွေရင်း နှီး က နည်းနည်း လေးနဲ့ လုပ်စားလို့ရပါတယ် ကွမ်းယာသည်လောက်တောင် အရင်းအနှီးမများဘူး ဆိုတာ တကယ် ဟုတ်တယ် .. ဒါပေမယ့် စိတ်တော့ တော်တော်ညစ်ရတယ် ည သန်းခေါင်းကြီး စိတ်ကူးပေါက်လို့ ဆိုပြီး စာသားတွေ ထပ်ထည့်တဲ့ MD နဲ့ လဲ ဖုန်းပြော လို့ပြောရ ၊ ဒိုမိ်န်း၀ယ်ပြီးမှ နာမည်ကြီးကတုံးတယ်ဆိုပြီး ပြောင်းချင် တဲ့ သူနဲ့ လဲတွေ့ရ ..web သမားဘ၀ ကလဲ တကယ့် ၀က်ပါပဲ .. ကြုံတုံး ကြော်ငြာ ၀င်ရအုံးမယ် ကျွန်တော့် ဆီ ဆိုက်တစ်ခုရေးရင် ဒိုမိန်းပါပါ ပြီးမှ သုံးသောင်းခွဲထဲပါ.:D
မိုက်တယ် --- ကျွန်နော်တစ်ခုတွက်ပြမယ် ဆိုက်တစ်ခုရေးတာက ၃၅၀၀၀ ရမယ် တက်သုတ်ရိုက်ရေးရရင် ၁ ပတ်ကြာမယ် အလုပ်အပ်တဲ့သူက ခပ်ထူထူ ခပ်ရစ်ရစ်ဆိုရင် တလကိုးသီတင်းပေါ့ ရေးခက 20000 ၀န်းကျင်လောက်ရမယ်ထင်တယ်ဒါလေးက ရေးပြီးပစ်ထားလို့မရဘူး maintenance လုပ်ပေးရတာလေးတွေက ပိုက်ဆံထပ်ရအုံးမယ်ရွှေဥဥတဲ့ ငန်းကြီးလိုပေါ့ဗျာဆိုက် ၁၀ ခုရေးထားရင် ၅ ခုလောက်က တနှစ်အတွင်းမှာ ၄ ကြိမ်လောက် ပြန်ပြင်ကောင်းပါရဲ့တစ်ကြိမ်ကို အောက်ကြေးဗျာ ၅၀၀၀ လောက်တောင်းလိုက် ၅*4*5000=100000 နောက်ထပ်ဘေးပေါက်လေးတွေရဖို့ရှိတယ် အလုပ်အပ်တဲ့သူတွေမှာ ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေလာရင် သူတိုသုံးမယ့် ကွန်ပျူတာ ဆိုင်မှာလိုက်၀ယ်ပေးလို့ ကော်မရှင်ရမယ်ဗျာ စက်တစ်လုံးကို ၁၀၀၀၀ ပတ်ချာလည်လောက်ရတတ်ပါတယ် တစ်နှစ်ကို ၁၀ လုံးဆိုရင် 100000 ဗျာဟော သူတို့ရဲ့စက်တွေက ပျက်အုံးမှာ ကိုယ်ကပဲပြန်ပြင်ပေးရမယ်ဆိုရင် စက်၁၀လုံးဟာ တစ်နှစ်လုံးစာ အကြိမ် ၂၀ ပျက်တယ်ထား တစ်လုံး ၅၀၀၀ နှုန်းလောက်နဲ့ ဆိုရင် = 100000အဲဒါတွေအားလုံးလက်ရှိအလုပ်ကထွက်စရာမလိုဘဲ လုပ်နိုင်ပါတယ် တစ်နှစ်စာ ၅၀၀၀၀၀ လောက်အကြမ်းဖျင်းတွက်လို့ရပါတယ် အရင်းတစ်သိန်းဖယ်လိုက်ရင် ၄သိန်းကျန်မယ်ဒါက ဖောက်သည် ၁၀ ယောက်လောက်ရှိရင် အနိမ့်ဆုံး ရနိုင်တဲ့ တနှစ်စာ ၀င်ငွေပါကွမ်းယာသည်လောက်ထော့ ၀င်ငွေမကောင်းသေးပါဘူး ပုံမှန် လူစည်ကားရာနေရာမှာ ရောင်းတဲ့ လမ်းဘေး ကွမ်းယာဆိုင်တစ်ဆိုင် သာမန်ရောင်းအားရှိရင် တစ်ရက်ကို ၁၀၀၀၀၀ ဖိုးလောက် ရောင်းရတယ် ကွမ်းယာလုပ်ငန်းရဲ့ အမြတ်က ၁/၃ ပါဒါပေမယ့် မိမိ အားသန်ရာ ၀ါသနာပါရာ အလုပ်ဖြစ်လို့ စိတ်ရှုပ်စရာ အနေထားတွေပေါ်လာရင်တောင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ငွေရနည်းပေမယ့် ကိုယ်စိတ်၀င်စားတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့လုပ်ရင် ထမင်းဖိုးတောင် အကုန်သက်သာသေးဗျာကျနော်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရော လခစား၀န်ထမ်းရော ၂ မျိုးလုံး အားပေးတယ်ဗျာလခစားက လောလောဆယ် စား၀တ်နေရေးပြေလည်မယ် ကျင်လည်ရာပတ်-န်းကျင်မှာ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပညာတွေရမယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွဲထားလိုက်တာကျတော့ မိမိ စိတ်အဆာပြေပေါ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာတာပေါ့ ရေရှည်ကျတော့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကမှ ကြီးထွားသထက်ကြီးထွားဖို့ အခွင့်ရေးရှိတာ yanaungmyo December 2009 edited December 2009 Registered Users Y3llowCak3;67726 said:ကျွန်တော် web application တွေရေးတတ်တယ် Software ရေးတတ်တယ်ရေးပြီးသား ရောင်းစားထားပြီးသားတွေလည်းရှိတယ် ဟိုးအရင် ပင်တီယန် ခေတ်ကတည်းက ကွန်ပျူတာတွေပြင်လာတာ အဲဒီခေတ်က စက်တစ်စုံကို ကားတစ်စင်းစာလောက်တန်တာနောပီအိုင်စီရေးတတ်တယ်ဗျာ အနည်းအကျဉ်းပေါ့ ဒါပေမယ့် လုပ်စားမယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ်အပြင်အလုပ်နေနဲ့ ကားမောင်းတတ်တယ် ၁၂ဘီးကားနော် သေးသေးမွားမွားကားတွေမဟုတ်ဘူး စက်ကြီးမောင်းနိုင်တယ် ထော်လာဂျီမောင်းနိုင်တယ် လက်ခဏာဖတ်တတ်တယ် နောက်ထပ်ပြောရရင် အများကြီးဗျာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုယ်နဲ့ အံ၀င်မယ့်အလုပ်တစ်ခုရှာရတာ မခဲယဉ်းဘူးဗျဒါပေမယ့် လုပ်စားနေတာ ဒီတီပီပါပဲ ကိုယ်ပိုင်ဗျာ။ ဒီတီပီလုပ်ငန်းက နေရမရွေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျ၀န်ထမ်း အခက်အခဲနည်းတယ် ၀င်ငွေထွက်ငွေ တည်ငြိမ်တယ် Risk အရမ်းမများဘူး ဒါကြောင့် DTP လုပ်ငန်းကို ရွေးထားတာ ပြီးတော့ ပုံနှိပ်နည်းပညာတွေက ကျနော် Crazy အရမ်းဖြစ်တာပေါ့၀ါသနာပါတာကတော့ စားပြီးအိပ် အိပ်ပြီးစားအလုပ်ကိုင်မကောင်းလို့က အခက်အခဲအရမ်းဖြစ်လာလို့ စုဆောင်းထားတာလေးတွေ ကုန်ရင် ကျျွန်တော် ကွမ်းယာတတ်တယ် လဘက်ရည်ဖျော်တတ်တယ် ကျနော် သူများ ကွမ်းယာဆိုင် ၃ ဆိုင်လောက် ငွေထုတ်တည်ထောင်ပေးထားတာရှိတယ် ဒါတွေက ကျနော်လုပ်စားနေတာနဲ့ လုပ်တတ်တဲ့ အပိုင်းလေးတွေခင်ဗျားကိုအကြံပေးရရင် ခင်ဗျားလုပ်နေတဲ့ ဟိုတယ်ဆိုတာ အိုင်တီလုပ်ငန်းမှမဟုတ်တာဗျာ ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီတီပီတွေပဲလုပ်နေရတာ အဲဒါနေပြည်တော်မလို့ပေါ့ဗျာ ဆိုင်ရှားလို့ ရန်ကုန်လိုသာဆို ခင်ဗျား ပုံလေးတောင်ဆွဲရမှာမဟုတ်ဘူး အစည်းေ၀းဖိတ်စာလောက်ရို်က် အခမ်းနားကျင်းပခွင့်လျှောက်လွာလောက်ရိုက်နေရမှာ ဒီအလုပ်ကို ခင်ဗျားဘာသာရွေးချယ်ခဲ့တာ ဘာမှဖီလင်ဖြစ်မနေနဲ့ ခင်ဗျား တကယ် အိုင်တီပညာနဲ့ပဲအသက်မွေးကြောင်းပြုချင်ရင် ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ မြန်မြန်ထွက် ပြီးရင် Software house တစ်ခုမှာ သွားလုပ်ဗျာ ရန်ကုန်မှာ ပေါမှပေါဗျာ ကျွမ်းကျင်၀န်ထမ်းလိုချင်လွန်းလို့ တပိုင်းသေနေတာ လစာများများလိုချင်ရင် စင်ကာပူထွက်ဗျာခင်ဗျားနေရာမှားနေလို့ပါ ဟိုတယ်အလုပ်က အိုင်တီသမားကို ဘယ်လိုမှ အထောက်အကူမပြုနိုင်ဘူးဗျ
ကျွန်တော် web application မရေးတတ်ဘူး Software မရေးတတ်ဘူး ဒီလောက ထဲကို၀င်လာတာ ၆ နှစ် ပဲရှိဦးမယ် အိုင်တီ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အရင်ဆုံးစလုပ်ဖူးတာ အင်တာနက်ဆိုင် မှာ အဲ့နောက် ဒီလိုင်းကို သဘောကျလို့ ဆက်လုပ်ဖြစ်သွားတာပဲ အင်တာနက်ဆိုင်ကနေထက်တော့ Dagon Center ရှေ့က LED Board Control လုပ်တဲ့ Company မှာ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ် ကွန်ပျူတွေ လိုက်ပြင်ဖူးတယ် အင်တာနက်ဆိုင် ၃ ဆိုင်လောက် လက်ခံပြီးတော့ ဖွင့်ပေးဖူးတယ် ခုနောက်ဆုံးအလုပ်က ဒီဟိုတယ် ရောက်လာတာပဲ အိုင်တီ နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော အတွေ့ကြုံကတော့ ဒါပဲ တခြား အလုပ်တွေကတော့ ထရောလာဂျီ စပယ်ယာပတ်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာလုပ်ဖူးတယ် ဖန်နေချာ စက်ရုံမှာ လုပ်ဖူးတယ် ခိုးကူခွေရောင်းဖူးတယ် ဘိလက်မြေသယ်ဖူးတယ် လဖတ်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ဖူးတယ် Y3llowCak3 ပြောသလို (ခင်ဗျားလုပ်နေတဲ့ ဟိုတယ်ဆိုတာ အိုင်တီလုပ်ငန်းမှမဟုတ်တာဗျာ ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီတီပီတွေပဲလုပ်နေရတာ အဲဒါနေပြည်တော်မလို့ပေါ့ဗျာ ဆိုင်ရှားလို့ ရန်ကုန်လိုသာဆို ခင်ဗျား ပုံလေးတောင်ဆွဲရမှာမဟုတ်ဘူး အစည်းေ၀းဖိတ်စာလောက်ရို်က် အခမ်းနားကျင်းပခွင့်လျှောက်လွာလောက်ရိုက်နေရမှာ) အဲဒါတော့ မဟုတ်သေးဘူးဗျ ရန်ကုန်က ဟိုတယ် တွေရယ် အချို့ ကော်ဖီ ဆိုင်တွေ မှာ တောင် Free WiFi Access ရနေပြီ ဆိုတာ Y3llowCak3 မသိတာလား မေ့ထားတာလားတော့ မသိဘူး ခု နေပြည်တော် က ဟိုတယ် တွေ တိုင်းမှာလည်း အိုင်တီ သမား ထားတယ် ဗျ Free WiFi Access လည်း ဟိုတယ် တိုင်း မှာ ရနေပြီ Y3llowCak3 ပြောတဲ့ (ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ အိုင်တီသမားဆိုတာထက် ဂျာနယ် Layout ဆွဲတဲ့သူက တာ၀န်ပိုကြီးတယ်နော် ဒင်းပေါက်ကရလုပ်လိုက်ရင် ဂျာနယ်တစ်စောင်လုံးပြောင်းပြန်စောက်ထိုးတွေဖြစ် အကုန်ကျော်ခွကုန်ရင် ထုတ်ေ၀သူ သိန်းရာဂဏန်း ရင်းထားရတာ ပလုံသွားမှာ) ဆိုတာ လည်း ဟိုတယ် တွေတော်တော် များများ မှာသုံးနေတဲ့ ဖုံးဆော့၀ဲ wintariff ဆိုတာ သိလားမသိဘူး wintariff ထိုင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားပြီဆို သိန်းရာ ဂဏန်းကို မပြောပါနဲ့ ဟိုတယ် တစ်ခုလုံးက ခေါ်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားဖုံးတွေ VIP ဖုံးတွေ အကုန်လုံး ပါသွားမှာဗျ အဲ့ဒါကို ကော Y3llowCak3 သိရဲ့လား မသိဘူး နောက်တစ်ခုက CCTV တွေ သုံးထားတဲ့ စက် ကိုယ် ပြောချင်တာကိုယ် ပဲ ရမ်းပြီးပြောလို့ မရသေးဘူး သူ့ဘက်ကိုယ် ဘက်ဆိုတာ ရှိသေးတယ် ဗျ ဟိုတလောက India သံအမါတ် မေးလ်ပို့ နေရင်းနဲ့ ကော်နက်ရှင် တချက်ကျသွားလို့ နေပြည်တော်က ဟိုတယ် တွေ အတွက် ချက်ချင်း ကို ဖိုင်ဘာလိုင်းတွေ ထိုင်ခိုင်းလိုက်တာကော သိလိုက်လားမသိဘူး Y3llowCak3 ပြောတဲ့ (ဟိုတယ်အလုပ်က အိုင်တီသမားကို ဘယ်လိုမှ အထောက်အကူမပြုနိုင်ဘူးဗျ) ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် ထောက်ခံပါတယ် ဒီကိုရောက်ကတည်းက ကိုယ်ကပဲ ပညာပေးရတာပါ Y3llowCak3 ပြောသလိုဆို ကျွန်တော် အနေနဲ့ ပရို တယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာများ ဆက်သင်ရင် ကောင်းမလည်း အကြုံလေးပေးပါဦး နော် emo December 2009 edited December 2009 Registered Users Y3llowCak3;67783 said:ကွမ်းယာသည်လောက်ထော့ ၀င်ငွေမကောင်းသေးပါဘူး ပုံမှန် လူစည်ကားရာနေရာမှာ ရောင်းတဲ့ လမ်းဘေး ကွမ်းယာဆိုင်တစ်ဆိုင် သာမန်ရောင်းအားရှိရင် တစ်ရက်ကို ၁၀၀၀၀၀ ဖိုးလောက် ရောင်းရတယ် ကွမ်းယာလုပ်ငန်းရဲ့ အမြတ်က ၁/၃ ပါ
သာမန်ရောင်းအားတောင် တစ်နေ့ တစ်သိန်းတဲ့ .. ဟိုက်ရှားပါး အဲဒါဆို ကျွန်တော်တစ်လ တစ်လ ခြောက်သိန်းလောက်ရဖို့ ခေါင်းမွေး ဖြုအောင် ရှာမနေတော့ဘူးကွမ်းယာသည်လောက် ပိုက်ဆံမရတာကိုလက်ခံပါတယ် ..:D :Dကိုယ့်လူ က web application တွေတောင်ရေးတတ်တာပဲ ဗျာ ကွမ်းယာအုံနာ လုပ်စားနေတယ်လို့ကျွန်တော့် ကို လဲ ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ အရင်းအနှီးလေးပေးပါလား ဗျာ ကွမ်းယာသည် များ အသင်းထောင်ရင် ကိုယ့်လူကို ဥက္ကထ ခန့်မယ် .. ကျွန်တော်လဲ လက်ရှိ အလုပ်ကို ရပ်ပြီး လူစည်တဲ့နေရာတွေမှာ ကွမ်းယာဆို်င် ၁၀ ဆိုင်လောက် ဖွင့်မယ် ဟေးဟေး တစ်ရက် ဆယ်သိန်းတောင်ဗျား... အဲဒီလောက်မရရင် တောင် သုံးသိန်းလောက်ပဲရပါစေ .. ကျေနပ်တယ် ကိုယ့်လူ ပြောပုံအရဆို .. အားလုံး ကွမ်းယာသည်တွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့ ကွမ်းယာသည်တွေ ကားစီးကုန်တော့မှာ ပေါ့ ကွမ်းယာသည်တွေကို နှိမ်တယ် လူတန်းစားခွဲတယ် ပြောတယ်လို့ စွပ်စွဲနေအုံးမယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာသမား အတွက် ကွမ်းယာ.com ဆိုပြီး ဒိုမန်း၀ယ်ပြီး ဆိုက်တစ်ခုရေးပေးမယ် ဆရာသမား ဓါတ်ပုံလေးဘာလေးရှိရင်ပေးပါလား ... home page မှာ ခင်ဗျား ရဲ့ ကွမ်းဂျိုုးတက်နေတဲ့ ပုံကြီး ကို မိန့်မိန့်ကြီးထားမလို့ :D:D:D sabai January 2010 edited January 2010 Registered Users *zin*;67484 said:ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ပြောကို မပြောချင်ဘူး။ ပြောပြန်ရင်လည်း အောင်မင်းလွန်ရာ ကြမယ်။ ဒို့ရွှေနိုင်ငံက ရွှေမြန်မာတွေများ Computer ကို တော်တော်ကြောက်ကြတယ်။ common sense လည်း သုံးဘူး။ တခုခုဖြစ်ပီဆို နည်းနည်းပါးပါး စူးစမ်းမယ် မရှိဘူး။ IT Technician လား Programmer လား Project Manager လား ဟင့်အင်း သိဘူး၊ ကွန်ပျူတာသမားဆို ထစ်ခနဲရှိ ပြေးခေါ်မှာဘဲ ဆိုတာကြီးပဲ၊ ကြိုးလေးလွတ်တာကအစ သူများတကာကို လာခေါ်ပြီး လုပ်ခိုင်းတယ်၊ Scan ကအစ ဖတ်လိုက်ရတာ လက်ကို ပြုတ်ထွက်မလား မှတ်တယ် ဟွန့် မုန်းတယ် :2:
အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်ဗျို့ . . . dookalay January 2010 edited January 2010 Registered Users yanaungmyo;67137 said:nitikitiဒီပို့စ်လေး တင်တာ ကောင်းတယ်ဗျာ ကျွန်တော်လည်း ရင်ဖွင့်ချင်နေတာ ကြာနေပြီ ကျွန်တော်က နေပြည်တော် က ဟိုတယ်တစ်ခု မှာ IT Technician အဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နေပါတယ် ကျွန်တော် ကြုံရတဲ့ ဟာတွေကတော့ nitikiti မေးထားသလို ဘာတွေလုပ်ခိုင်းသလည်း ဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ် ကျွန်တော် မှာ တာ၀န်ယူထားတော့ IT Technician ပါ ဒါပေမယ့် စာစီစာရိုက်၊ဒီတီပီ၊ဒီဇိုင်း ပိုင်းတွေပါ လုပ်ပေးနေရပါတယ် ကျွန်တော် တာ၀န်ယူထားတဲ့ အပိုင်းကအလုပ်က ပါးတော့ မန်နေဂျာတွေ ခိုင်းတာကို အောင့်သတ်သတ်နဲ့ လုပ်ပေးနေရပါတယ် သူတို့ ကိုပြောပြလည်း နားမလည်ပါဘူး ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သတ်နေသမျှ ကျွန်တော့ တာ၀န်လို့ပဲ ထင်နေကြတာပါ
အင်းဗျ ကျနော် က တော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေကို ဆားဗစ်လုပ်တယ်ဗှအကိုတို့ပြောသလို hardware ရော software တာ၀န်ယူရတယ်ဗျာအင်တာနက်လဲ အလကားသုံးရတယ်လေဟီးဟီး ကိုက်တယ်ဗျ...... လုပ်ချင်ရင်ပြောဟီး............................ infofreakz January 2010 edited January 2010 Registered Users sure brobut,You should as back them to as follows:-"What the F**k are you asking to me huh? If you wish, just do it yourself and don't ask me to do those f***ing stuffs which are not relate to me.!" bomitetee March 2010 edited March 2010 Registered Users အဲ ဒါ ကို ပြာ တာ လို. လညး် ခေါ် ပါ တယ်..:)...:p..စိတ် မ ဆိုး နဲ. နော် အ နော် နဲ. တူ လို. ပါ thetkazaw March 2010 edited March 2010 Registered Users ကျွန်တော် လဲ Company တစ်ခုမှ IT Technician လုပ်ပါတယ် .... ကျွန်တော် Company သူများနဲ့ မတူဘူးဗျ .... ဟဟဟ ကောင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး လစာလေး နှစ်ပဲ ခြောက်ပြားနဲ့ စာပါသင်ခိုင်းတယ် ..... Computer နဲ့ပတ်သက် ရင် IT အကုန်လုပ်ရတယ် ... ( မိုက်တယ်နော် ) တစ်ခါတစ်လေ မီးတောင် ၀င်ရိုက် ရသေး .. ဟဟဟဟ တစ်ခါတစ်လေ လိုအပ်ရင် Editing သမားလဲ လုပ် ရသေးသဗျ ... ဒါတင်ဘယ်က မလဲ Designer တောင်ဖြစ်သွားသေးဗျာ ( သူတို့ အပြောတော့ IT က Computer နတ်တွေပေါ့ ဗျာ ) တစ်ခုခုများ မလုပ် တတ်ရင် IT ဖြစ်ပြီး ဒါလေးတောင် မသိဘူး ဆိုပြီး ချီးမွမ်းတော့ အကုန် လေ့လာရသဗျ ...... ပြီးတော့ Web Developer ဖြစ်သွားပြန်ရော .... အဲ့တေ့ာ ညီအကိုမောင်နှမ များ IT Technician ဖြစ်ချင် 1 - Video Editing တတ်ရမယ်2- Photo Shop တတ်ရမယ်3- ဖောရှောတတ်ရမယ်4- စာသင်တတ်ရမယ် ( DTP Course )5- ပညာရှင်ဆိုတဲ့ စိတ်မမွေးတတ်ရဘူး6- လိုအပ်ရင် အလုပ်ကြမ်းနဲ့ သန့်ရှင်းရေးပါလုပ်တတ်ရမယ် ...............7- အပိုစောင်း Web Design ပါတတ်ရမယ် A+ , Networking က မလိုအပ်ဘူး inforgyi March 2010 edited March 2010 Registered Users Yes,It is not possible for IT position. Morris March 2010 edited March 2010 Moderators thetkazaw;72575 said:ကျွန်တော် လဲ Company တစ်ခုမှ IT Technician လုပ်ပါတယ် .... ကျွန်တော် Company သူများနဲ့ မတူဘူးဗျ .... ဟဟဟ ကောင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး လစာလေး နှစ်ပဲ ခြောက်ပြားနဲ့ စာပါသင်ခိုင်းတယ် ..... Computer နဲ့ပတ်သက် ရင် IT အကုန်လုပ်ရတယ် ... ( မိုက်တယ်နော် ) တစ်ခါတစ်လေ မီးတောင် ၀င်ရိုက် ရသေး .. ဟဟဟဟ တစ်ခါတစ်လေ လိုအပ်ရင် Editing သမားလဲ လုပ် ရသေးသဗျ ... ဒါတင်ဘယ်က မလဲ Designer တောင်ဖြစ်သွားသေးဗျာ ( သူတို့ အပြောတော့ IT က Computer နတ်တွေပေါ့ ဗျာ ) တစ်ခုခုများ မလုပ် တတ်ရင် IT ဖြစ်ပြီး ဒါလေးတောင် မသိဘူး ဆိုပြီး ချီးမွမ်းတော့ အကုန် လေ့လာရသဗျ ...... ပြီးတော့ Web Developer ဖြစ်သွားပြန်ရော .... အဲ့တေ့ာ ညီအကိုမောင်နှမ များ IT Technician ဖြစ်ချင် 1 - Video Editing တတ်ရမယ်2- Photo Shop တတ်ရမယ်3- ဖောရှောတတ်ရမယ်4- စာသင်တတ်ရမယ် ( DTP Course )5- ပညာရှင်ဆိုတဲ့ စိတ်မမွေးတတ်ရဘူး6- လိုအပ်ရင် အလုပ်ကြမ်းနဲ့ သန့်ရှင်းရေးပါလုပ်တတ်ရမယ် ...............7- အပိုစောင်း Web Design ပါတတ်ရမယ် A+ , Networking က မလိုအပ်ဘူး
LOL A it Technician don't need either A+ or Networking Skill :P zawsanmin March 2010 edited March 2010 Registered Users [quote=winlwin;67194]ဆိုင်မလားတော့ မသိဘူး။ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကို သတိရတယ်။ တစ်ခာတည်း မင်းသားလုပ်ဖို့ မလွယ်တော့ မီးထိုး၊ ဖြတ်လျှောက် အဆင့်ကနေ စရတာပော့။ တခြားနိုင်ငံမှာတော့ ရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမှာကတော့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နောက်ကို လိုက်ရမယ်ထင်တယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း အိုင်တီပိုင်းမှာ နားလည်တာ ရှားပာလိမ့်မယ်။ :39: ပိုက်ဆံရှိလို့ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ကြတာ များပါတယ်......အဲလူတွေ တော်တော်များများ it ပိုင်းကို နားမလည်ပါဘူး.. သူတို့ပြောရတာ လက်ပေါက်ကပ်တယ်... ဘယ်လိုနားလည်အောင် ပြောရမလဲမသိဘူး......... ကျွန်တော်လည်း it သမားတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး.... ခုမှ စလုံးရေ စ မလို့ရှိပါသေးတယ်.. ထင်တာလေးတွေ ၀င်ပြောကြည့်တာ... မှားရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ...... princeakarit March 2010 edited March 2010 Moderators မှန်ချက် လန်ထွက်နေတာဘဲ... မြန်မာပြည် အိုင်တီ တက်ကနီရှင်ဘွပေါ့... မကျေနပ်ရင် ထွက်လိုက်... အဲလိုနဲ့ ကျနော်လည်း ကုမ္ပဏီတော်တော်များများရဲ့ ဘလက်လစ်ဖြစ်သွားတာဘဲဗျ... :d kozin March 2010 edited March 2010 Registered Users လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်လောက်က IT technician လေးတစ်ယောက်ပေါ့technicianပေါက်စနလေးလို့တောင်ခေါ်လို့ရပါ့မလားမသိဘူး။အမှန်ကတော့Gamerလေး၊ အိမ်ပြေးလေး။Game installation တော့ရှယ်ကျွမ်းတယ်။Computer Game Center တစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်လျောက်တယ်။သူငယ်ချင်းမျက်နှာနဲ့အလုပ်ခန့်ခံရတယ်။ဘာမှမတတ်တော့လန့်နေတာ၊ မေးရင်သေပြီ။ Interview မပါပဲအလုပ်ရလိုက်တာ။အလုပ်ခန့်ပြီး၊ နောက်၂ရက်လောက်မှ Boss ကဆိုင်ကိုလာတယ်။ညီလေးခဏကွာတဲ့၊ Interview မယ်တဲ့အရပ်ကတို့ရေ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်နော်။ဒါနဲ့ခပ်တည်တည်နဲ့သူနောက်လိုက်သွားတယ်။ ရင်ထဲမှာတော့ fresher လေး ရည်းစားစကားလိုက်ပြောသလိုပဲ။မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်တော့၊ သူကမေးတယ်"ညီလေးGameကောင်းကောင်းဆော့တတ်လားတဲ့" အဆင်ပြေတာပေါ့။ General reborn 4.0 ဆော့တတ်လားတဲ့အမယ်လေးနော် Game သရဲပါဆိုမှနော်ညီလေးမင်းအဲဒီ General မှာဘယ်တပ်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲတဲ့ အစ်ကှိကတော့ infantryကိုအကြိုက်ဆုံးပဲတဲ့ဗျာဒီလိုငြင်းကြ၊ခုန်ကြရင်းနဲ့(တကယ်မခုန်ကြပါဘူး)Interview လေးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီးBoss နဲ့ technician အတုလေးဟာ general မှာအားသွားပြိုင်ကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ tanugpawthar March 2010 edited March 2010 Registered Users အစ်ကို ကံကောင်းတာပေါ့ကျနော်လဲ တက်ကနီရှင်ဖြစ်ချင်လို့ အလုပ်လိုက်ရှာအင်တာဗျူးတွေဖြေတော့စာတွေဖတ်ထားသမျှတွေမမေ့အောင် တနေ့တခေါက် ဘုရားရှိခိုးသလို ဖတ်လိုက်ရတာ တွက်သမျှနည်းပညာတွေမှတ်လိုက်ရတာဘယ်အပိုင်းကလာလာပေါ့ အပိုင်ဆိုပြီးတွက်ထားတာ အင်တာဗျူးရောက်တော့ ဘယ်လိုဖြေရလဲဆိုတော့ ၀င်းဒိုး တင်တာကို အဆင့်လိုက်ပြောပြဆိုတော့လူတောင်ပြာသွားတယ်ဗျ စဉ်းစားကြည့်ပေ့ါဗျာအလွတ်ရဖို့နေနေသာသာ အဲဒီတုန်းက ၁ ခါပဲတင်ဖူးတာ ဒါတောင်ကိုယ့်စက်ကိုမလို့ပေါ့၀င်ဒိုးတင်တယ်ဆိုတာကို အလွတ်အတိအကျပြောဖို့ဆိုတာ အခုကာလအနေနဲ့ အရမ်းခက်သွားပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ versionတွေ SPတွေ vistaတင်ပုံ 7တင်ပုံ တွေအရမ်းကွဲသွားပြီလေဒီလိုသိခဲ့တာလဲ ဒီအင်တာဗျူးလေးကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ် ကျနော်အလုပ်ရခဲ့လို့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် it သမားတယောက်အတွက်တော့ အတွေ့အကြုံရယ် theoryပိုင်ဖို့လိုတယ်ကျနော့်အမြင်ပြောတာပါ လိုအပ်တာလေးရှိရင် ေ၀ဖန်ပေးပါ zawsanmin March 2010 edited March 2010 Registered Users Window တင်တာကို အလွတ်ကျက်ရတော့မယ်နဲ့ တူတယ်...... tanugpawthar March 2010 edited March 2010 Registered Users ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ ဒါပေမယ့် အတွေ့အကြုံလေးကတော့ပိုကောင်းပါတယ် thanyawzinmin May 2010 edited May 2010 Registered Users IT Technician အင်း ကျွန်တော်လဲ အိုင်တီဘက်ကိုခုစလျှောက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။အဲ့မှာ ကျွန်တော် ဆိုက်တစ်ခုမှာသွားတွေ ့တယ်ခင်ဗျ ။တော်တော်လေး တာ၀န်တွေနဲ ့ပြည့်၀ရမယ် ့အရည်အချင်းတွေကိုရေးပြထားတယ်။ဖတ်ဖုူးကျလားမသိပေမယ့် ကျွန်တော့်အစ်မလက်ရာလေးပေါ့။
ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်၀သော အိုင်တီပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ပထမဦးဆုံးမှန်ကန်တဲ့ အိုင်တီခေတ်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေအနေနဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။အိုင်တီအလုပ်အကိုင်တွေအနေနဲ့ Professional Level, Mangement Level နဲ့ Executive Level ဆိုပြီး အဆင့် ၃ ဆင့် ရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ အခြေခံအဆင့်ဖြစ်တဲ့ Professional Level အဆင့် အလုပ်အတွေ့အကြုံ အရည်အချင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်တွေ အဆင့်ဆင့်ရရှိလာပြီဆိုမှ အထက်အဆင့်တွေကို တက်လှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။Technical Level မှာProgrammer/Software DeveloperSystems Analyst/Analyst ProgrammerWeb Developer/Multimedia SpecialistDatabase AdministratorNetwork Technician/Network AdministratorSystems Technician/System AdministratorInstructor/Lectureစသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် လုပ်ငန်းတာ၀န်တွေ ထမ်းဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ Management Level မှာ ကြည့်ရင်လည်းIS ManagerIT ManagerEDP ManagerProject ManagerSystems ManagerNetwork System ManagerTraining Managerဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းရပ်အသီးသီးမှာ တာ၀န်ခံမန်နေဂျာများအဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Executive Level လို့ ခေါ်တဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိအဆင့်များမှာတော့Vice Persident (IT)Vice Persident(Information Service)Chief Information Officer-CIOChief Technical Officer-CTOChief Security Officer-CSOTechnical DirectorIT/IS DirectorIT Project Directorစတဲ့ ရာထူးတာ၀န်တွေကို ထမ်းဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။	အဆင့်မြင့်ရာထူးများဖြစ်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိ အဆင့်ရာထူးများကို မထမ်းဆောင်မီ Technical အဆင့်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပြီးမှ အဆင့်မြင့်ရာထူးတာ၀န်များကို ထမ်းဆောင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Software Development Line မှာ Junior programmer, Senior Programmer, System Analyst, Project Manager စသဖြင့် တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် တက်လှမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Network Professional Line အနေနဲ့ဆိုရင် Network Technician, Network Engineer, Network System Manager, CTO (Network and Security) စသဖြင့် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။	ဘယ်ကျွမ်းကျင်မှု လမ်းကြောင်းကိုပဲ ရွေးချယ်ရွေးချယ် Industry ready လို့ ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အသင့် ၀င်ရောက်နိုင်ဖို့ကိုတော့ ဦးစားပေးစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပြီး အလုပ်အတွေ့အကြုံ ကျွမ်းကျင်မှုများအပြင် အိုင်တီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အရည်အချင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်တွေကို ရရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေမှာ ထိုက်တန်တဲ့ ရာထူးတွေကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။	အို်င်တီဆိုင်ရာ အရည်အချင်းအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်တွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ Level အသီးသီးအလိုက် မိမိရဲ့ လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး ရယူလေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။	အထက်ဖော်ပြပါ လက်မှတ်တွေထဲမှာ ဒီပလိုမာနဲ့ ဒီဂရီလက်မှတ်တွေကတော့ Academic Oriented ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီလက်မှတ်တွေရဖို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှာ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ခန့် လေ့လာသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပြီး Certificate Level ကတော့ ၃ လ ဒါမှမဟုတ် ၆ လ စသဖြင့်ပေါ့လေ လေ့လာသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။	အဲဒီအပြင် Academic Orienrted မဖြစ်တဲ့ အိုင်တီစာမေးပွဲတွေကိုလည်း ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေလည်းဆိုတာတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ မပြောတော့ဘူးနော်။	အခုပြည်တွင်းမှာဆိုရင် National Exam တွေဖြစ်တဲ့ MCPA နဲ့ ITPEC တွေကို ဖြေဆိုနို်င်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲတွေအနေနဲ့ဆိုရင် On Line ကနေ တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုနိုင်တဲ့ Microsoft, CISCO နဲ့ Sun Java Exam တွေကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု စာစစ်ဌာနတွေမှာ ဖြေဆိုနိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ခလစာမြင့်မားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေမှာ အိုင်တီပညာရှင်အဆင့်နဲ့ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ခုနပြောထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီပြီး ပြီးပြည့်စုံမှုရှိနေရပါမယ်။	အခြားအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတော့вЂ¦(1) Membership of Professional Bodiesကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အသင်း၀င်လျှောက်ထားခြင်း(2) Office Procedure/HR Regulationsရုံးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို နားလည်အောင် လေ့လာထားခြင်း(3) Knowledge of Businessစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသီးသီး၏ သဘောတရားများကို နားလည်အောင် လေ့လာထားခြင်း(4) Communication Skillလူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ထားခြင်း(5) Social Networkingမိမိဘ၀တိုးတက်ရာကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မည့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ ရှာဖွေဆက်သွယ်ထားခြင်း(6) Global Outlookမိမိဒေသတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာဗဟုသုတများ သိသင့်သည်များ ကြိုတင်လေ့လာထားခြင်း(7) Role Modelမိမိဘ၀တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကို ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်မည့် စံပြုထိုက်သူတစ်ဦးဦး သတ်မှတ်ထားခြင်း (ဥပမာ вЂ“ ဘီဂိတ်လ်၊ အိုဘားမား)(8) Effortsကြီးမားသော ဇွဲလုံ့လ၀ိရိယဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း(9) Ethicပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မယ့် ကောင်းမွန်သော ကျင့်၀တ်သိက္ခာများရှိခြင်းတို့ကို ပိုင်နိုင်ရရှိနေမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ အိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာ အမှန်အကန်လို့ ပြောကြားခဲ့သူကတော့ MCF ရဲ့ ၁၀ နှစ်မြောက်ပွဲမှာ ဦးငြိမ်းဦး(အတွင်းရေးမှူး-မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း) က ပြောကြားတာ ဖြစ်ပြီး လူသားတိုင်း အိုင်တီပညာရှင်များ ဖြေစေဖို့ ပြန်လည်ကောက်နုတ်တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ကျွန်မရဲ့အမြင်ကတော့ ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်၀တဲ့အိုင်တီပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်ဖို့က မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ နောက်တစ်ချက်က အရည်အချင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ၊ အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေအပြင် အဓိက တစ်ချက်က ငွေကြေးတတ်နိုင်ထောက်ပံ့မှု၊ နောက် အချိန်ပေးနိုင်မှု ဒါတွေ ပြည့်စုံနေမှသာ ပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ ကျွန်မ ထင်မြင်မိပါတယ်။ဒီလိုမျိုး ဟောပြောချက်တွေကို ကျွန်မ သွားရောက်နားထောင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်ထိ ဘာမှဖြစ်မလာသေးတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါတောင် ဟောပြောတဲ့ပွဲတိုင်း မတက်ရောက်နိုင်တာကိုလည်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်မိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဟောပြောပွဲတွေမှာ ၀င်ကြေးဆိုတာ မကောက်ခံတဲ့အတွက်လည်း ကျွန်မတို့လို ငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့သူတွေအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ထိုက်ကြောင်း ပြောပါရစေရှင်вЂ¦вЂ¦
Credit to Manawphyulay xaz May 2010 edited May 2010 Registered Users နေရာတော်တော်များများမှာ အဲလို ဖြစ်နေပါတယ်အစကတည်းက ကြိုတင်ပြီး ကိုယ့် အလုပ်ရှင်နဲ့ သေချာပြောထားတာကောင်းပါတယ်ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်တာပဲ ကိုယ်လုပ်တာ ကောင်းပါတယ်ကိုယ်က တစ်ခါတစ်လေ မနေတတ်လို့ စေတနာပိုပြီး လုပ် ပေးရာကနေလဲ အကျင့်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်မရရင်မလုပ်ဘူးပေါ့ ပညာရှင်မာန ဆိုတာလဲ တစ်ခါတစ်လေရှိသင့်ပါတယ် ဒါက အလုပ်ကိုးကိုက လဲ ရင်းထားရတာပဲလေ:tongue: yanaungmyo May 2010 edited May 2010 Registered Users မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒီလိုပါပဲ ပညာရှင် အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ တော်တော် များများ ထိုက်သင့်တဲ့ လစာကို အပြည့်အ၀ မရ ကြပါဘူး ကျွန်တော် အပါအ၀င်ပါ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအလုပ်က ထွက်ပြီး နောက်အလုပ်ရှာ နောက် အလုပ်လည်း ဒီလိုပဲပြန်လာတာက များပါတယ် အလုပ်မ၀င်ခင်ကတည်းက အလုပ်ရှင် နဲ့ ကြိုတင်ညှိုနိူင်း ကိုယ်ကျေနပ်မှလုပ်တာကောင်းပါတယ် Aung Ko Ko Yu August 2010 edited August 2010 Registered Users winlwin;67194 said:ဆိုင်မလားတော့ မသိဘူး။ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကို သတိရတယ်။ တစ်ခာတည်း မင်းသားလုပ်ဖို့ မလွယ်တော့ မီးထိုး၊ ဖြတ်လျှောက် အဆင့်ကနေ စရတာပော့။ တခြားနိုင်ငံမှာတော့ ရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမှာကတော့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နောက်ကို လိုက်ရမယ်ထင်တယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း အိုင်တီပိုင်းမှာ နားလည်တာ ရှားပာလိမ့်မယ်။ :39:
ဟုတ်ပါတယ် အစ်ကိုပြောတာမှန်လိမ်.မယ်ဗျ..... ကျွန်တော်တို. နိူင်ငံမှာ အိုင်တီနည်းပညာနဲ.ပတ်သက်ပြီး သိပ်ပြီးကျယ်ကျယ်ပြန်.ပြန်. မရှိသေးတော့ အလုပ်အကိုင်အနေနဲ. ရှားပါးလိမ့်မယ်ဗျ.... တစ်ကယ်လို. ဒီအလုပ်ကို တကယ်မြတ်နိူးတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်နေရာကနေဖြစ်ဖြစ်စရမှာလေ... ကျွန်တော်လညး် ကွန်ပျုတာဆိုင်တစ်ခုမှာ အလုပ်စ၀င်တုန်းကဆိုရင် အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို.ကို တန်းမလုပ်ခိုင်းသေးဘူးဗျ...... ခေါ်တာကတော့ system engineer ဆိုပြီးခေါ်တာပဲ အလုပ်စစ ၀င်ချင်း ICT show ပွဲနဲ. စတိုးတော့ ပစ္စညး်သယ်ဘ၀ ရောက်သွားတယ် ဂိုထောင်ထဲက ပစ္စည်းတွေသယ်ရတယ် ဂိုထောင်ရှင်းရတယ်...ဒီလိုပါပဲ အလုပ်ဆိုတာတော့ ကိုယ့်မှာ အတွေ.အကြုံမရှိတော့လည်း..အောက်ခြေကနေစရတယ်လေ အခုတော့ ကျွန်တော်အဲ့ဒီထက်ကောငး်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာပေါ့ ..... beegran August 2010 edited August 2010 Registered Users ကျွန်တော် ကွန်ပြုတာအရောင်းဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ဘူးတယ် ကိုယ့်ကိုခန့်တာ ဘာပို့စ်နဲ့မှန်းတောင်မသိဘူး ဒါပေမယ့်အလုပ်က ပိုက်ပိုက်တော့ တော်တော်ရတယ်ဗျ ကွန်ပြုတာနဲ့ပတ်သက်ရင် သိပ်မရပေမယ့် အရောင်းပိုင်းရယ် နောက်အလုပ်ရဲ့ပုံစံတွေတော့နားလည်သားဗျ တစ်ကယ်ပါတစ်ကယ် ၂လလောက်ပဲလုပ်ခဲ့တာပါ နှစ်သိန်းလောက်ရခဲ့တယ်နော် ဘာကြောင့်ထွက်ရတာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်က network engineer ဖြစ်ချင်တာကိုး အခုလောလောဆယ်တော့ သင်တန်းတက်နေတယ် ပြီးရင်တော့ အင်း.........နောက်ပြီး အခုပို့စ်မှာတွေရတာရော အရင်ကကြားဘူးတာရောပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလွဲနေသလိုပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ technician နဲ့ engineer ကွာခြားပုံပါ နောက်ပြီး system engineer ရောပဲ ကိုယ့်လျှောက်မယ့်အလုပ်ရဲ့ nature ကိုလဲ ကြည့်ရဦးမယ်ထင်တယ် ကိုယ်က organization တစ်ခုရဲ့ network engineer ဖြစ်ချင်တာလား ဒါမှမဟုတ် telecommunication engineer ဖြစ်ချင်တာလားဆိုတာလဲ ကြည့်ရဦးမယ်ထင်တယ် ဒါမှ ကိုယ့်၀ါသနာလဲကိုက် ပိုက်ပိုက်လဲရ ဖြစ်မှာလေ နောက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် technician တစ်ယောက်လို့မသတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့ technician ထက်မြင့်တဲ့ level တွေရှိတယ်လေ level မြင့်လေ ပိုက်ပိုက်ပိုရလေ ဒဒါက ကျောင်းက ဆရာမပြောကြားဖူးတာပါ1. network operator2. network administrator3. network technician4. network engineer5. network architecture6. network expertlevel တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကွာခြားချက်ရှိသလို အလုပ်ရဲ့ character တွေလည်း ကွာသွားပါတယ် ဒီတော့ ကိုယ်က ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာလဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော် championboylay December 2010 edited December 2010 Registered Users ဖတ်ရတာတွေက အားရစရာကြီးဘဲ ကျွန်တော်က ဘွဲ့ရတော့ IT field မှာလုပ်ချင်တာ ... အစ်ကိုတို့ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဓာတ်တောင်ကျသွားပြီ:confused::confused::confused: emo December 2010 edited December 2010 Registered Users အဆိုးတွေ ပြောတာများတော့ အကောင်းဘက် က လှည့်ပြောရအောင် ဗျာ . အဲဒီလို အစုံခိုင်းတော့ . ဘာတွေ ဖြစ်သလဲ တချက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ပထမ ကျွန်တော် travel company တစ်ခုမှာ လုပ်တယ် . network သမား အဖြစ်နဲ့ ပေါ့ . . ဒီတော့ ကျွန်တော့ တာ၀န် က အဲဒီမှာ သိပ်လုပ်စရာ မရှိပါဘူး . printer ထုတ်မရရင် ကြိုးလေး ဘာလေးကြည့် . ခေါင်းချောင် နေတာလေး ပြန်တပ်ပေး နောက် အင်တာနက်မရရင် ဖုန်းဆက်ပြီး ဟိုဘက်ကို လှမ်းကော ရတယ် . ဒီလောက်ပဲ ဗျ . အဲ ကိုယ်က လဲ အားနေတော့ အလကား လူလို ဖြစ်နေတယ် . ပျင်းစရာကြီး . နောက် အဲဒီမှာ web site ရှိတော့ သူတို့ ဟာ တွေ ၀င်ကလိရင် web maintainer ကြီး ဖြစ်ရော . ဒါနဲ့ စိတ်၀င်စားပြီး html css တွေ လေ့ လာ . နောက် php လေ့လာ . ရင် းနဲ့ web designer ဘ၀ နောက် web developer ဘ၀ . နဲ့ အခု ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် web group တစ်ခု ကို ကောင်းကောင်းထိန်းကျောင်း ထားနိုင်တဲ့ ဘ၀ . ကြားထဲမှာ တော့ မန်နေဂျာ စားဖို့ ဗယာကြော် ၀ယ်ပေးရဖူး ပါတယ် . အဲဒါ ကို စိတ်နာစရာ အနေနဲ့ မတွေးတော့ ပါဘူး ဗျာ . ကိုယ် ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရင် ကိုယ့် IT သမားကို ဗယာကြော် ၀ယ်မခို်င်းမိဖို့ သိလာပါတယ် လို့ပဲ သဘောထားပါတယ် . နောက် excel ရိုက်ပေးရပါတယ် . ဒါလဲ ပညာတစ်ခု အနေနဲ့ ပဲ သဘောထားပါတယ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ မှာ vinyl လိုက်ကပ်ပေးရတယ် . တောင်းတောင်းပန်ပန် နဲ့ သွားလေဖြဲပြီးတော့ ပေါ့ဗျာ .အဲဒါက အခု ကို်ယ် web site အတွက် marketing ဆင်းတဲ့ အခါ အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ် နောက် ပုံနိိှပ်တိုက်တွေ သွား ရတယ် စက္ကူထုပ်တွေ ထမ်းရတယ် . အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့် ကို သိလာ ရတယ် . အခု ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တော့ . ပန်းဖလက် တစ်ခု ထုတ်မယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်း design service company တစ်ခု ကို သွားမအပ်တော့ ပါဘူး . ကိုယ်က ကြားထဲ က အဆင့်တွေ သိနေတော့ ဖလင်သပ်သပ်ခွဲ စက္ကူသပ်သပ် ၀ယ် ပြီး ပုံနှိပ်တိုက် ကို သွားလိုက်ရုံနဲ့ စရိတ် က ထက်၀က် သက်သာတယ် ဆိုတာ သိလာပါတယ် နောက် ကြားထဲမှာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု မှာလုပ်သေးတယ် . အဲဒီမှာ ပန်းဖလက် ေ၀ ရပါတယ် . ပွဲတွေ မှာ တပ်မတော်ခန်းမ ှမှာ . ရှက်တာပေါ့ဗျာ အစကတော့ . .. ကိုယ်က web သမား အမည်ခံ ဖြစ်နေပြီ ကိုး . ကိုယ့် အသိ IT သမားတွေ လာရင် ဒီကောင် ပန်းဖလက်ေ၀ရတဲ့ အဆင့် ဖြစ်နေပြီ ထင်မှာ စိုးတာပေါ့. အဲဒါတွေ ကို ပညာ ဒါမှမဟုတ် အတွေ့ အကြုံလို့ အခု သဘောထားပါတယ် . အခု လုပ်ငန်း အတွက် လိုအပ်လာရင် ကိုယ်တိုင် ပန်းဖလက် လိုက်ေ၀ပါတယ် . စိတ်ခံစားမှု ချင်း မတူတော့ ပါဘူးရှက်လဲ မ၇ှက်တော့ ပါဘူး . ဘယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ မဆို စိတ်ပင်ပန်းမှု ၊ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းမှု ၊ အချိန် . အဲဒါတွေ အများကြီး ပေးဆပ် ဖို့ တော့ လိုပါတယ် အဲဒီတော့ အနှစ်ချုပ်ပြောချင်တာက . . ကို်ယ် က IT သမား စစ်စစ် ပညာမာန နဲ့ ပဲ ကိုယ့် အဆင့် နဲ့ တန်တာပဲ ခိုင်းတာကို ပဲ လိုချင်တာပေါ့ ဗျာ . ဒါပေမယ့် အဲဒီလို မဟုတ်ပဲ ပေါက်တတ်ကရခိုင်းတာကို ခံရရင်လဲ အတွေ့အ ကြုံလို့ ပဲ သဘောထားနိုင်ရင် အဆင်ပြေပါတယ် လို့ ပဲ ပြောပါရစေ . Kyaw Soe Linn March 2011 edited March 2011 Registered Users *zin*;67484 said:ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ပြောကို မပြောချင်ဘူး။ ပြောပြန်ရင်လည်း အောင်မင်းလွန်ရာ ကြမယ်။ ဒို့ရွှေနိုင်ငံက ရွှေမြန်မာတွေများ Computer ကို တော်တော်ကြောက်ကြတယ်။ common sense လည်း သုံးဘူး။ တခုခုဖြစ်ပီဆို နည်းနည်းပါးပါး စူးစမ်းမယ် မရှိဘူး။ IT Technician လား Programmer လား Project Manager လား ဟင့်အင်း သိဘူး၊ ကွန်ပျူတာသမားဆို ထစ်ခနဲရှိ ပြေးခေါ်မှာဘဲ ဆိုတာကြီးပဲ၊ ကြိုးလေးလွတ်တာကအစ သူများတကာကို လာခေါ်ပြီး လုပ်ခိုင်းတယ်၊ Scan ကအစ ဖတ်လိုက်ရတာ လက်ကို ပြုတ်ထွက်မလား မှတ်တယ် ဟွန့် မုန်းတယ် :2:
ဟုတ်ပဟုတ်ပ မော်နီတာ ပါ၀ါခလုတ်မဖွင့်ဘဲနဲ့ကွန်ပျူတာ ပျက်သွားလို ့ဆိုပီးခေါ်လို့စီဒီတွေနဲ ့ပြေးလိုက်ရတာမောလို ့။ okcomputer May 2011 edited May 2011 Registered Users Dear emo and Manawphyulay, i really accept and appreciate ur suggestion... Morris May 2011 Moderators It beenawhile . That make sense and kind nostalgic to me . Anyways My thought , my consideration will bealittle bit or bit more change as the time being changed . If for now , i would like to tell you guys when your guys faced those sort of problem , your have to cancel improper order . That what must beaprofessional done . A professional have certain scope of work. your will be in those cycle eternally , Unless your don't . That is just contending between Boss and employers . Not only in our fields , our country but also in other fields and country . Boss wants all things or work done with cheapest (even free) and Employee want highest . That just the some very basic rules for economic kosatmaw July 2011 Registered Users ဟုတ်ကျွန်တော် လဲ internet ဆိုင်မှာservices ယူထားတာပါ။ဒါပေမယ့်services က 35000ပဲရတယ်လေ။ပြီးတော့စာရင်းရေးတာက၃၅၀၀၀ရတယ်။လုပ်တာကတော့အကုန်လုပ်ရတယ်။copyပါပါတယ်။အလုပ်ကလဲပိတ်ရက်no ပဲ။အလုပ်ကနားမလို့ပဲ ။နားရင်online သုံးရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးလေ။ဒါကြော့င်onlineရပြီးserviceအလုပ်ပဲလုပ်ရတဲ့ဟာများရရင်ပြောကြပါနော်။personalပိုင်းလဲခိုင်းတယ်အခု အလုပ်က။တင်းနေတယ် ။ရင်ထဲပေါ့တယ်ပြောလိုက်ရလို့။thz ပါနော် zinphyo07 July 2011 edited July 2011 Registered Users kosatmaw, Do you mean are you working alone at you work?Why did your boss apply other staffs for other jobs(eg.copy,book-keeper,personal job).Are you tiring at your work?Are there very busy?Tell me your boss name and your work's name.I will go there and I want to check your words is real.If your words are real I will tell your boss "you are very self-fish person" or If your words are wrong,I will call you "a gay".I think you should tell to your boss openly asagentle man.If I foundaIT job for you,I ........ «12»	Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla